Great Marketers vesos Bad ahịa
M nọ n'ụgbọala na West Side nke obodo ahụ, lere anya na bọọdụ, e nwere bọọdụ maka ngwá ọrụ. Kama ịgba bọọdụ ahụ bụ mgbasa ozi a na-ahụkarị, mkpọsa ahụ ruru ala niile. Otu ogwe aka gbagoro na post na ngwá ọrụ ahụ dị na ebe a na-ede akwụkwọ. O yiri ka ogwe aka ahụ na-abịa si n'ala na-abịa. Ọ bụrụ na m nọ na mkpa a hama, M ga-eleghị anya, na-echeta ika na ikekwe, gaara zụtara ya.
Na Internetntanetị, enwere m obi ụtọ ịnweta mgbasa ozi dị mkpa mgbe m na-achọ ọchụchọ. Enwere m okwukwe karịa na onye mgbasa ozi na-eme nchọpụta isiokwu dị elu, na-achọpụta m, ma na-enye m mgbasa ozi dị mkpa karịa nke m nwere na Google na-enye m nsonaazụ dị mkpa.
Ọ na-amasị m inye ndị mgbasa ozi ọtụtụ ozi nkeonwe. Ana m eme ya ka ha nwee ike ịghọta m nke ọma ma nye m mgbasa ozi nke kwekọrọ na ọnọdụ igwe mmadụ m. Achọrọ m mgbasa ozi smart. Achọrọ m azum ahia nke ọgụgụ isi. M ka nwere mmasị n'ịzụ ahịa ma ọ bụ mgbasa ozi okike nke nwere ike ịchụ m, dọta uche m, wee mee ka mkpịsị aka m n'elu oke ahụ.
Ọ bụ m bụ naanị otu? Ana m azụ ahịa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile n'ịntanetị ugbu a. Ọ bụrụ na agaghị m eleta ụlọ ahịa ọzọ na ndụ m, agaghị m. Mgbe m hụrụ mgbasa ozi na adị m njikere ịzụta, m na-ama jijiji na ya. M hụrụ n'anya ahịa na m hụrụ n'anya mgbasa ozi.
Ekwenyere m na ịzụ ahịa na mgbasa ozi na-enweta ihe ọjọọ ọjọọ n'ihi ndị ahịa umengwụ. Kama itinye ihe okike n'ihe ize ndụ ma ọ bụ tinyekwu mgbalị iji hazie ma lekwasị anya, ha na-eme ka ihe nzuzu ha dị n'ihu ọtụtụ anya anya dị ka ha nwere ike.
Nnukwu ndị ahịa nwere ike ịchọpụta ụzọ ị na-aga, ma ọ bụrụ na ị na-aga n'okporo ụzọ ha, ha na-eduga gị ozugbo. ruo mgbe ọ ga-adị ogologo. Ndị ahịa dị egwu na-atụfu ụgbụ. Enweghi ike inweta ndu zuru oke? Nnukwu net! Ma enweghị ike? Ụgbụ! Ha na-adọpụta azụ ha mgbe ha na-agba mbọ na-agbapụ.
Kedu maka gị? You ka na-enwe ekele maka nnukwu ahịa na mgbasa ozi?
Tags: Germanmgbasa ozi na-akwụ ụgwọnnyocha nyochamgbasa ozi n'ịntanetịtracking
WordPress: Otu esi eme vidiyo Facebox Popup
Jul 2, 2010 na 7: 38 AM
Ọ bụ ahịa kachasị mma na okike m na-echeta. A na m acho ime ka ndi ozo fuu n'ihi na o burula ndi ozo.
Jul 2, 2010 na 7: 48 AM
Enwere ike ikwu n'eziokwu na anaghị m enwe ekele maka nnukwu mgbasa ozi, n'agbanyeghị agbanyeghị ya. N'ezie, ka onye mgbasa ozi na-anwa ịdabere na m, otú ahụ ka m na-ewepụ ya. Ọ nwere ahụmịhe yiri ya site na iji ọtụtụ ngwaahịa Microsoft: ha na-agbasi mbọ ike ịtụ anya ihe m chọrọ (lee anya, akpaaka!), Mana ha anaghị arụ ọrụ dị mma na ya.
Otu ihe ahụ na-aga maka mgbasa ozi mgbasa ozi nke kama ịnwa ịkwali ire ere, na-anwa ịmepụta ọnọdụ metụtara akara ahụ. Ke kasị mma ya adighi ike, na kasị njọ ya aghụghọ.
Maka m, ndị mgbasa ozi na-emebi emebi aha ha karịa mgbe ha kpọsaa. Ọ na-adị m ka ha na-anwa ịghọ aghụghọ. Na miri ala, echere m na ọtụtụ mmadụ na-eche otu ihe ahụ. Ha na-eji iwe na-azụ ngwaahịa ndị mgbasa ozi, mana ha ga-ahọrọ ịzụta site n'ụdị ndị ọzọ na-eme ihe n'eziokwu na ndị nwere nghọta mgbe ndị ọzọ dị.
Echere m na ọ siri ike maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi ịnakwere, mana yana ọtụtụ ọwa na teknụzụ dị ugbu a maka ijikwa mgbasa ozi, uru nke mgbasa ozi niile na-agbada; ọ bụdị “ezigbo” ya.
Jul 2, 2010 na 8: 12 AM
Deckerton, ọ bụ nnukwu echiche! Otú ọ dị, enwere m ọchịchọ ịmara ụdị ahịa na mgbasa ozi ị na-agba n'ebughị ụzọ mara na a na-eji aghụghọ agwa gị!
Jul 2, 2010 na 12:43 PM
M nọnyeere gị, Doug! Enwere m ekele maka ya mgbe mgbasa ozi metụtara mmasị m ma jide uche m n'ụzọ ndị okike. Nke bụ eziokwu bụ, M zụrụ ihe… na ezigbo mgbasa ozi na-eme ka ọ dịrị m mfe ijikọ na ngwaahịa ndị dị m mkpa.